Thwebula MP3Gain 1.2.5 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: MP3Gain
MP3Gain – isofthiwe kulesetayelekile umthamo MP3-files ngaphandle ukulahlekelwa izinga. MP3Gain ulawula umsindo, ihlaziya futhi inquma quality sound. Isofthiwe amathuluzi for ukuhlela single of MP3-amafayela noma batch processing Game ezikhona. MP3Gain ilandisa izichibiyelo tag APEv2, evumela ukuthi wena ukukhansela ukuhlinzwa odlule, uma kunesidingo. Isofthiwe ibusa sakugcina system imithombo futhi evelelwa okulula ukuyisebenzisa interface.
Volume ukuzinza of MP3-amafayela
Batch ukucutshungulwa amafayela
Possibility ukukhansela imisebenzi last
Interface elula elula
Amazwana ku MP3Gain
MP3Gain software ehlobene
I-MP4 Converter – Inhlangano ye-MP4 – Imigwaqo ekhombisa izinto ezithile Программа поддерживает работу с большинством популярных медиа форматов и пакетную обработку файлов.
Ithuluzi lokuthuthukisa uhlelo lokusebenza futhi nokwandisa i-gameplay. Isofthiwe ikuvumela ukuba ufeze ukusebenza ngendlela yokuzenzekelayo noma yemodi.
I-AOMEI Image Deploy – isoftware yakhelwe ukufaka isithombe sohlelo nazo zonke izinto ezifakiwe kumakhompyutha amaningi kunethiwekhi evamile yasendaweni.